Akuvinjwe ushukela ovela wakwamanye amazwe!
Kodwa nemboni ayemukele ushintsho
Imboni ka Shukela eNingizimu Afrika elengela engcupheni yokuwa ngenxa kashukela oshibhile ovela emazweni angaphandle kwaleli, ngaphandle uma inhlangano yamazwe ebhekele ukulawulwa kwezohwebo eNingizimu Afrika i-International Trade Administration Commission of South Africa (ITAC) ingenza ngokushesha izinhlelo ezinqala yenyuse intela ekhokhwa abahwebi ngokuletha ushukela kuleli uvela kwamanye amazwe.
Abalimi abamnyama bahlomule ngo-R172m embonini kashukela
USAFDA elwelwa uguquko
Ngesikhathi u-SAFDA uthola ukwamukeleka nokuthathwa njengenhlangano emqoka embonini kaShukela yazinikezela ekuletheni izinguquko ezidingeka ngokushesha ukuze kuzuze bonke abalimi. Lokhu kubala kuko, ukumiswa kokungeniswa kwashukela oshibhile kuleli uvela kwamanye amazwe, ukusungulwa kohlelo lokukhokhela bonke abalimu abamnyama ngentengo engcono yemakethe yasekhaya, ukukhipha bonke abalimi abamnyama ezindlekweni zokuthuthwa kukamoba bakhokhelwe ngentengo yasepulazini, ukuxazululwa kwezinkinga zokulibaziseka komoba
osushisiwe ngaphambi kokugaywa,
ngokuthi kushintshwe uhlelo lokungena
komoba emshinini, ukuze umoba wabantu abamnyama ungalindi kodwa ungene ugaywe kuqala.
Kamuva nje ukuphikelela kuka SAFDA nokufuna izinguquko embonini, kuye kwakhombisa imiphumela ebonakalayo, njengoba imboni yamukele uhlelo olunamasu angu-8 oluzoletha lezizinguquko ngokushesha. Loku kuza njengempendulo emva kokuthola umyalo onqala uvela ekomidini lasePhalamende (Parliamentary Portfolio Committee on Trade and Industry),
wokuthi kungakapheli amasonto amabili, lemboni ibe isiqhamuke nesu lokuletha
izinguquko ezibonakalayo ngokukhulu ukushesha, kanti futhi singakapheli isikhathi esingange zinyanga ezinthathu ibe isinesu
lokuletha izinguquko ezizokwenzeka esikhathini esimaphakathi kuya kweside. Inani lesabelo zimali esibekelwe lezizinguquko eziphuthumayo singu R172 million, kanti ukusebenza kwaloluhlelo kuzohlehla kuyoqala kusukela ngomhlaka-1 April 2018. Lomboniso ongenzansi ukhombisa indlela lemali ehlukaniswe ngayo ngokwalamasu angu-8.
Kwenyuswa inani elikhokhelwa abalimi abamnyama abalima ngokuncane ihambisane nenani lentengo encono yasekhaya R60m R32
Kuqalwa uhlelo lokukhokhela abalimi abamnyama abalima ngokuphakathi nendawo ngenani lentengo enconoyasekhaya
Kuhlangabezwana nezindleko zokuthutha umoba zabalimi abamnyama abalima ngokuncane R20m R8
Abalimi bomoba abamnyama abalima ngokuncane bakhokhelwa izindleko zembewu ewuhlobo olufanele R20m R11
Abalimi abamnyama abalima ngokuncane bazolekelwa ukukhokha amalevi obulungu R20m R4
Inhlangano yabalimi abamnyama esanda kuqala ilekelelwa ngemali yezindleko zokukhulisa inhlangano R20m R3
Kukhushulwa inani elibekelwe ukuqeqesha abalimi bomoba abamnyama ngokusebenzisa isikhwama se-Grower Development Account (GDA) R20m R4
Kwakhiwa uhlelo lwemboni lokusheshisa imizamo yokwandisa amathuba emisebenzi eyenzelwe intsha nabesifazane R20m
USekela Sihlalo weSAFDA, uLindiwe Hlubi ekhuluma nezimenywa emcimbini wokwethulwa ngokusemthethweni kukaSAFDA eLangeni Hotel eThekwini. (Isithombe: Nolwazi Maphosa)
Ekuqaleni kwalonyaka, imboni kashukela yafaka isicelo kwi-ITAC, icela kukhushulwe inani lentela yokungeniswa kukashukela, loko obekuzosiza ukuvikela imboni yakuleli. Okwamanje lentela imi ku $566 nosekubeke lemboni engcupheni yokuwa. Ukuze iphume kulesimo imboni iye yafakaisicelo sokuthi lentela yenyuswe ngo $290 , okuzoyibeka ku-$856 ngethani lashukela olethwa kuleli. Kamuva nje, ITAC iye yanika izinkomba zokuthi izosicubungula isicelo salemboni. Impendulo ingabhekwa ekupheleni kuka July 2018. Ngesikhathi kusalindiwe abalimu bomoba basathwele kanzima njengoba sekuqaliwe kwabikwa ukuthi asebegayile ngokuvulwa kwemishini abayitholanga inzuzo, kunalokho kugcine kuyibo abakweleta imishini. Loku kuchaza ukuthi emva konyaka omude abalimu besebenza kanzima bezikhandla ngokutshala nokunakekela umoba, bagcina sebezithola bekweleta izimboni ezibagayela umoba wabo. Uma kungekho okwenzakalayo ngokukhulu ukushesha ukuze kunyuswe intengiso yashukela ongeniswa kuleli, umoba uzohlala uyisitshalo esingenanzuzo. Lesisimo sikhinyabeza abalimu abancane nabakhulu kanye nabagayi ngokufanayo njengoba inani liye lehla ngo 13,5 %.
Yize I-ITAC kuyiyo edlala indawo enkulu ekushintshweni kwe ntengo yokungenisa ushukela kuleli ibe ileyo ezovikela imboni, nayo imboni inendima enkulu ekumele iyidlale yokuphumela obala ngokusekela izinhlelo zenguquko zalelizwe. I-SAFDA iye yafaka isiphakamiso iphonsela imboni inselelo ngezinto okumele lemboni izenze njengendlela youkhombisa ukwamukela ushintsho ezweni, okubalwa kuzo:
• Ukusungula isikhwama senguquko esizoxhasa izinhlelo zokuletha ushitsho kulemboni kuthuthukiswe abantu abamnyama • Ukusungulwa kohlelo lokukhokhela bonke abalimu abamnyama ngentengo engcono yemakethe yasekhaya. • Ukukhipha bonke abalimi abamnyama ezindlekweni zokuthuthwa kukamoba bakhokhelwe ngentengo yasepulazini. • Ukuxazululwa kwezinkinga zokulibaziseka komoba osushisiwe ngaphambi kokugaywa, ngokuthi kushintshwe uhlelo lokungena komoba emshinini, ukuze umoba wabantu abamnyama ungalindi kodwa ungene ugaywe kuqala. • Ukuxhaswa kweSAFDA ngemali yokusebenza njengoba kuyiyo inhlangano elekelela ngokuzikhandla ukuletha inguquko kulemboni.
Yize lamaphuzu angenhla ezosiza abalimu abamnyama ukuthuthukisa inzuzo, kanye nokuthuthukisa imboni ekubeni nedumela ekwenzeni izinguguquko, I SAFDA ikholelwa ukuthi kusekhulu okungenziwa yilemboni ukuthuthukisa abantu abamnyama, uma kubhekwa ukuthi inani lenzuzo etholakala ngokuvikelwa uHulumeni lilinganiselwa phakathi kwezigidigidi ezingu R2 billion no R4 billion ngonyaka.
Abalimi beSAFDA baseMpumalanga
bakhethe ubuholi babo besifundazwe
NgoLwesihlanu 23 March balimi abangamalungu eSAFDA eMpumalanga akhetha ubuholi bawo besifundazwe. Ithimba lobuholi elakhiwe ngamalungu angu-15 lakhiwe ngabamele abalima ngokuncane kanye nabalimi bezokubuyiselwa komhlaba baseKomati naseMalalane. I-SAFDA ikuthokozela kakhulu ukuthi yonke imiphakathi engu
Semukela usomnotho omusha kwaSAFDA
esebenza ngezomnotho wayo imboni yakwashukela. Kwezinye izinto azobe ebamba iqhaza kuzo ukumela u SAFDA emakomidini ehlukene akwa-SASA, futhi abuye eluleke abaphathi bakwaSAFDA nabalimi ngezinto ezithinta umnotho wemboni ezifana ne RV nokunye. Siyakwamukela kwikusasa lemboni, Aubrey.
8 enamasimu amakhulu kunawo wonke aphakela imishini yase Komati neMalalane ajoyine iSAFDA futhi amelelekile kulobuholi obusha besifundazwe. Inhlangano ngayinye kwezingu-7 zabalima ngokuncane eKomati kanye naseMalalane wayemelelwe yizihambeli ezingu-5 emhlanganweni. Zonke izinhlangano zakhetha oyedwa ozozimela ekomidini lesifundazwe. Phakathi kweminye imisebenzi esheshayo yeKomidi kuzoba ukwakha izakhiwo zabalimi kuzo zonke izindawo, ukusekela ukusungulwa kwehovisi lesifundazwe le-SAFDA eMpumalanga, ukusekela abasebenzi behhovisi kanye nokulungiselela ukwethulwa ngokusemthethweni kukaSAFDA eMpumalanga.
Kuyimpumelelo yemboni yonkana
Sisezikhathi ezintsha embonini kaShukela, nokubonakala ngezimpawu zobumbano nokuzinikela kabusha ezinguqukweni. Lolushintsho lufike nokuthathwa kwe SAFDA njengenhlangano emqoka embonini ka Shukela. Loku kwabonakala emicimbini wokwethulwa ngokusemthethweni kwe-SAFDA eyayibanjwe ngomhlaka 26 January 2017, lapho kwabokhona izihambeli eziningi embizweni eyayise Gingingindlovu Sports Ground kanye nase mcimbini wesidlo sakusihlwa owawuse-Elangeni Hotel eThekwini. Ukwamukelwa kuka SAFDA embonini kashukela, kwachazwa izikhulumi eziningi njengokunqoba kwemboni yonkana.
Bangaphezu kuka-600 abalimi abazoqeqeshwa ngohlelo lwe-SAFDA
Ukuqeqeshwa emikhakheni eyahlukene kwezolimo kulonyaka wezolimo ka 2018-19. Lokhu kwenziwe kwaba impumelelo imboni yakwashukela ngokwamukela isicelo soxhaso
se-SAFDA ngemali elinganiselwa kuR1.1 million ekuqeqesheni abalimi abamnyama. Izifundo zihlanganisa phakathi kwezinye, izifundo zamakhono ezolimo, i-Junior SeniorCertificate kwezokulima umoba. Uqeqesho luzokwenziwa abesikhungo sakwa-Shukela Training Centre kanye ne-South African Sugar Reasearch Institute (SASRI).
Abalimi bakwaSwayimane bathokozela u-R2.6 million owusizo loMnyango wakwa-DRDLR
Abalimi abalima ngokuncane bakwa Swayimane basanda kubuthana embizweni ebiseholo lase Nonco bemukela ngokusemthethweni uxhaso lwezimali oluvela eMnyangweni wakwa Rural Development and Land Reform (DRDLR), nobese kwiyinxenye yesibili yemali yokubaxhasa. Loluxhaso luyingxenye yesamba esingu- R9 million abnikwa yona nguMnyango ngonyaka ka-2015 ukuze bazithuthukise ngokutshala umoba endaweni yakwaSwayimane. Kulesi sigaba sesibili, uSiphapheme Co-operative uthole u-R1,700,000 kwathi i-Inzwakele yathola-R800,000. Ngesikhathi emukela loluxhaso uSihlalo weSAFDA Mill Area Committee (MAC) ebe futhi enguSihlalo we-Siphapheme Co-operative, uMuziwemali Thusi uthe: “Ngenxa loluxhaso loMnyango selube nomphumela wokukhuphula umkhiqizo
kulendawo usuka ku-16000 wamatani waya ku-60000 wamatani ngonyaka” Oyinkosi yesizwe kulendawo iNkosi Gcumisa ubonge uMnyango ngokusiza umphakathi wakhe, wabe edlulisa isicelo kuMnyango Wezokuthuthukiswa Kwezindawo ZaseMakhaya nokubuyiswa koMhlaba ukuthu wenze umhlaba utholakale kubantu, njengalokho umhlaba ongaphansi kwamakhosi unganele. Imizwa efanayo yabelwe oyikhansela lakwa-Ward 8 uMnuz Gasa, othe ubuholi buzokweseka yonke imizamo yokuthuthukisa umphakathi waseSwayimane. Ngokusho kohlelo lwebhizinisi, izimali zizosetshenziselwa ukutshala, ukuthenga izinsizakusebenza kanye nesakhiwo seshede. UMasipala waseMshwati usevele usenikele ngendawo okuzokwakhiwa